अमेरिकी प्रतिबन्धले हुवावे धरासायीः मोबाइल फोन बिक्री ४० प्रतिशतले घट्यो ! « GDP Nepal
अमेरिकी प्रतिबन्धले हुवावे धरासायीः मोबाइल फोन बिक्री ४० प्रतिशतले घट्यो !
Published On : 18 June, 2019 8:03 am
काठमाडौं । अमेरिकी प्रतिबन्धसँगै चिनियाँ प्रविधि कम्पनी हुवावे धरासायी बन्ने बाटोमा गएको छ । हुवावे दूरसञ्चार उपकरण उत्पादन गर्ने विश्वको सबैभन्दा ठूलो र र स्मार्टफोनको दोस्रो ठुलो उत्पादनकर्ता कम्पनी पनि हो ।
ह्वावेईले सुरक्षा जोखिम सिर्जना गरेको आरोप अमेरिकाले लगाउँदै आएको छ।अघिल्लो महिना अमेरिकाले हुवावेमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । नयाँ अमेरिकी कानुनका अनुसार अमेरिकी वा अमेरिकी प्रविधि प्रयोग गर्ने कम्पनीहरूले ह्वावेईसँग काम गर्न पाउने छैनन्।
अमेरिकी प्रतिबन्धसँगै हुवावेका उत्पादनको बिक्री ४० प्रतिशत घटेको जनाइएको छ । हुवावेका संस्थापक रेन जेङ्फीले कम्पनीका मोबाइल फोनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय विक्री गत महिना ४० प्रतिशतले घटेको स्वीकारेको बीबीसीले जनाएको छ । रेनले आफ्ना उत्पादनमा वार्षिक ३० अर्ब अमेरिकी डलरले कटौती गर्ने बताएका छन्।
बीबीसीका अनुसार सन् २०१९ र २०२० मा उसको विक्री एक सय अर्ब डलरमा सीमित हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि ह्वावेईले सन् २०१९ मा विक्रीको प्रक्षेपण झन्डै १२५ अर्ब डलर बराबरको गरेको थियो।
स्मार्टफोनको विक्री विश्वभर उल्लेख्य रूपमा घटे पनि चीनमा भने बढिरहेको छ ।